March 2012 ~ ဆုံနေကြ
Saturday, March 31, 2012 လပြည့်ဝန်း No comments
လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲသူ များပြားလာသော်လည်း လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား မမျှတမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်အား အုပ်စု လေးစုခွဲ၍လည်းကောင်း၊ မြို့ပြင်အား အုပ်စုနှစ်စု ခွဲ၍လည်းကောင်း ဧပြီ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ လျှပ်စစ်မီး အလှည့်ကျပေးသည့် စနစ်ကို ပြန်လည် ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က ကြေညာသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် A, B, C နှင့် H ဟူ၍ အုပ်စုခွဲကာ အလှည့်ကျ မီးပေးမည်ဖြစ်ရာ တအုပ်စုကို ခြောက်နာရီစီ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်လတ် က
“မီးပေးချိန်ကို မနက် ၅ နာရီက ၁၁ နာရီထိ၊ မနက်၁၁ နာရီက ညနေ ၅ နာရီထိ၊ ညနေ ၅ နာရီက ည ၁၁ နာရီထိ၊ ည ၁၁ နာရီက မနက် ၅ နာရီထိ။ အဲလို လည်ပြီးတော့ ပေးသွားမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တွေက ပြည်သူတွေ ဘယ်အုပ်စုမှာပါလဲ ဆိုတာကို ကြေငြာပေးထားမယ်” ဟု မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောဆိုသွားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း၊ မြို့ပြင်နှင့် စက်မှုဇုန်များအား ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ လျှပ်စစ်မီး အလှည့်ကျ ဖြန့်ဝေသုံးစွဲမည့် အစီအစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ - မဇ္ဈိမ)
မြို့ပြင်ပိုင်းကိုလည်း အုပ်စုသုံးစု ‘က’၊ ‘ခ’ နှင့် H ဟူ၍ခွဲကာ က နှင့် ခ ကို ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီအထိ တစုအား
ပေးပြီး ည ၁၁ နာရီမှ နံနက် ၅ နာရီအထိကို အခြာအုပ်စုအတွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
H အုပ်စုတွင်မူ ၂၄ နာရီ မီးပေးမည့် နေရာဌာနများအဖြစ် ဆေးရုံများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ လုံခြူံရေးအတွက် ချထားရ သည့် အစိုးရတပ်နေရာများ၊ ဘဏ်များ၊ လေဆိပ်နှင့် ဘူတာရုံများ၊ ရဲစခန်းနှင့် အကျဉ်းထောင်များ၊ သံရုံးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
စက်မှုဇုန်များကိုလည်း အုပ်စု နှစ်စု A နှင့် B ဟူ၍ အလှည့်ကျ မီးပေးသည့်စနစ် ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ရာ အုပ်စု A အတွက် မနက် ၆ နာရီမှ မနက် ၁၁ နာရီကြားနှင့် အုပ်စု B အတွက် မနက် ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဝေ
ယမန်နှစ်က ရဲရွာ ရေအားလျှပ်စစ်မှ လျှပ်စစ်ရရှိခဲ့မှုနှင့် သုံးစွဲမှု ပမာဏ ယခုနှစ်လောက် များပြားခြင်း မရှိသောကြောင့် အလှည့်ကျလျှပ်စစ်မီး ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ၂၄ နာရီနီးပါး လျှပ်စစ်ရရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ် ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်မှာ ရေရရှိမှု နည်းပါးနေ၍ လာမည့် ဇူလိုင်လမှသာ မီးကို ပုံမှန်ပြန်ပေးနိုင်မည်ဟု ယူဆရကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ်ပေးဝေရေး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်လတ် က ပြောသည်။
“မနှစ်က ရဲရွာ ရေအားတိုးတယ်။ မီးပေးနိုင်တယ်။ ဒီနှစ်ကျတော့တနှစ်အတွင်း သုံးစွဲတဲ့ ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု တက်လာ တယ်။ ပြီးတော့ ထပ်မံတိုးချဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် နည်းနည်း မလုံလောက်ဖြစ်တယ်"ဟု
ရဲရွာတွင် သတ်မှတ်ချက်ရေပမာဏထက် လျော့ကျနေသည်။ ရေဝင်မှု ပမာဏမှာ တနေ့လျှင် ၁,၂၄၈ ကုဗပေ ဝင်ကာ အထွက်မှာ ၂၄,၁၅၇ ကုဗပေ ဖြစ်နေ၍ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှု မလုံလောက်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် မီးမကြာခဏပြက်ကာ ကြိုတင်မသိရ၍ ပို၍ခက်ခဲကြောင်း မြို့ခံများက ပြောဆို
“ကျနော်တို့က ကျောက်တံတားမှာ ရုံးစိုက်တယ်။ မီးပျက်တာက မနက်ပိုင်း တခုတည်းကို ခဏနေပြတ် ခဏနေလာ
ဖြစ်နေတယ် စိတ်မရှည်ဘူး။ ပျက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုကြောင့် ပျက်မယ်ဆိုတာ ပြောပြသင့်တယ်။ ကြေငြာသင့် တယ်။ အခုက အကျိုးအကြောင်းမသိရဘူး။ အတော့်ကို စိတ်ပျက်တယ်၊ ကျနော်တို့က ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရတာ ဆိုတော့ စက်တွေလည်း ထိတာပေါ့ဗျာ။ မီးစက်ကိုလည်း ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဆိုတော့ အတော့ကို ခက်ပါတယ်ဗျာ"ဟု ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းရှိ ပုဂ္ဂလိက ကုမပ္ပဏီတခု၏ တာဝန်ရှိသူ တဦးကပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် မီးစက်သံများညံနေကြောင်းလည်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက “ဧပြီ ၂ ရက်နေ့မှ မပြောနဲ့ အခုကတည်းက မီးကပျက်နေပြီ။ နေ့တိုင်းကို ပျက်နေတာ။ လာလိုက်ပျက်လိုက်နဲ့ မီးစက်သံက တမြို့လုံး ညံနေပြီ” ဟု ကျောက်တံတားမြို့နယ် အတွင်းမှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ပိုင်ရှင် တဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတွင် တနေ့တာ ပုံမှန်သုံးစွဲနေသော လျှပ်စစ်ပမာဏမှာ မီဂါဝပ် ၅၂ဝ ကျော်ဖြစ်ကာ တနိုင်ငံလုံး ထုတ်လုပ် မှုမှာ ၁,ဝ၇ဝ မီဂါဝပ်ခန့်သာ ရှိနေ၍ ကျန် ၅၅ဝ မီဂါဝပ်ကို အခြားတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များက ခွဲဝေသုံးစွဲလျက်ရှိသည်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် က တနိုင်ငံလုံးတွင် ရေအားလျှပ်စစ်ကဏ္ဍမှ လျှပ်စစ်ယူနစ် ၅,၉ဝဝ သန်း ကျော်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်
ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမှ ၁,၈ဝဝ သန်းကျော် ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ကြောင်း အမှတ် ၁ နှင့် ၂ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနများ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းက ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာက နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတခုတွင် “ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅ဝဝ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက သုံးမှာလဲ။ သုံးစရာမရှိရင် market ရဲ့သဘောအရ ရောင်းစားရမှာပေါ့” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျေးလက်တောရွာပေါင်း ခြောက်သောင်းကျော် ရှိသည့်အနက် နှစ်ထောင်ကျော်သာ လျှပ်စစ်မီး
ပေးနိုင်သေးကြောင်း လျှပ်စစ် ၂ ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသွား ခဲ့သည်။
မကြားရကြာပြီ ဖြစ်သော သံချပ်များကို ယခုနှစ်မှ ပြန်လည် စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD က လည်း သံချပ်များ အသုံးပြုပြီး မဲဆွယ်သွားမည်ဟု မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် NLD ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
NLD ပါတီမှ အနုပညာရှင်များဖြင့် ဖျော်ဖြေပွဲများပြုလုပ်ပြီး မဲဆွယ်နေသည့်အပြင် သံချပ်သီချင်းများ ဖြင့် မဲဆွယ်ရာ တွင်လည်း အောင်မြင်မှုများ ပိုမိုရရှိကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် NLD ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ပြောသည်။
“သံချပ် သီချင်းတွေနဲ့ အောင်နိုင်ရေး သီချင်းတွေ ပါပါတယ်။ ဒီနေ့ ဖျော်ဖြေရေး စည်းရုံးရေးဟာ နောက်ဆုံး နေ့ပြုလုပ် တာဖြစ်တယ်လေ။ ၃၁ ရက်နေ့ဆိုရင် ကျမတို့ အကုန်နားမယ်။ အခုသီချင်းလေးတွေနဲ့ ဆိုရင် သူတို့ အားလုံးကို ပျော်ရွင်သွားစေတယ်။ အနုပညာဆိုတော့ လူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာ စွဲသွားစေသလို လူတော်တော်များလည်း စိတ်ဝင်စားပြီး အား ပေးထောက်ခံတာနေကြပါတယ်။ ခုထိတော့ အနှောက်ယှက် မရှိပါ။ အားရကျေနပ်မိပါတယ်။”
အဆိုပါ မဲဆွယ်စည်းရေးခရီးစဉ်ကို ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် NLD ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပါတီဝင်များက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
NLD စည်းရုံးရေး သံချပ်သီချင်းများတွင် “ဒီမိုကရေစီ +++နိုင်ငံတော်သစ်ဆီ+++ ရွှေရောင် အောင်ပွဲ ဆီ+++” “လူထုအားလုံးစုံစုံညီ ပြည်သူအားလုံး သံပြိုင်ချီ စစ်အာဏာ ချုပ်ငြိမ်းရေး အတွက် ပြည်သု့အောင်ပွဲလာပြီ…” စသည့် စာသားများ ပါဝင်သည့်အတွက် ပြည်သူများ အကြိုက်တွေ့ကြကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း မဲဆွယ်နေစဉ်(ဓါတ်ပုံ - အင်တာနက်)
မင်္ဂတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် ရပ်ကွက် ၂၀ ရှိပြီး စည်းရုံးရေး ပုံစံနေရာအဖြစ် ရပ်ကွက် ၃ခု သို့မဟုတ် ရပ်ကွက် ၄ခုကို တစုစီ သတ်မှတ်ပြီး စုစုပေါင်း ၆ စုသတ်မှတ်ကာ သွားရောက် စည်းရုံးခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြောရရင်တော့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အစပ်ကနေပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်း ဖျော်ဖြေရေးဆင်းတာပေါ့။ နောက်ဆုံးနေရာက သမ္မတရုံ အရှေ့မှာပဲ ဖျော်ဖြေရေး နောက်ဆုံးပြုလုပ်သွားတယ်။ ဗလကုန်းဘက်တို့ ကုန်သွယ်မှုနေရာဘက် တို့ပါတာ ပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်က ပိုပြီးတော့ အားရတယ်။ အရင်တစ်ခေါက်က သာမန်စည်းရုံးရေးထက် ဒီတခေါက်က ပိုအားရတယ်။ အခုတခေါက်မှာ ဒီမှာရှိတဲ့လူထု တွေရဲ့  စိတ်ဝင်စားမှုက အရင်ကထက် ပိုအားကောင်းသလို ပျော်ပျော်ရွင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်” ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ သံချပ်များနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်အတွက် ဒေသခံလူထုများကလည်း နှစ်ခြိုက်အားပေး ကြသလို မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင် NLD ပါတီအား ထောက်ခံသူများ များပြားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်နေ သီရိ နေ၀င်း ကပြောသည်။
“ဒီမှာက အသက်ပြည့်သူပါ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကလည်း လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို စိတ်အားထက်သန်စွာစိတ်ဝင်စား အားပေးနေကြတယ်။ အခုဆိုရင် သံချပ်သီချင်းတွေ၊ အောင်နိုင်ရေး သီချင်းတွေ နဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီး စည်းကားသိုက် မြိုက်သွားတာပေါ့။ ကားတွေ၊ ဆိုက်ကားတေ၊ွ ဆိုင်ကယ်တွေ တိုင်းလိုလိုမှာ NLD နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ တံဆိပ်တွေ၊ စတီကာတွေ၊ အင်္ကျင်္ီ၊ လက်ပတ် တွေက ရဲနေတာပဲ” ဟု သူကပြောသည်။
ယနေ့ NLD၏ ဤဖျော်ဖြေရေးအစီစဉ်ကို လူအများက လာရောက်အားပေးကြသည့်အတွက် ကတို့ဆိပ် ရပ်ကွပ်တွင် ကားများရပ်ရန်နေရာလွတ်ပင်မရှိကြောင်း ကတို့ဆိပ် ရပ်ကွပ်နေ တစ်ဦးကပြောသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နေရာအတွက် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ USDP၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)၊ နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ပါတီသစ်၊ မြန်မာအမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD တို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များ မရမ်းကုန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးဖျော်ဖြေ
အနုပညာများဖြစ်ကြသော ဇော်ပိုင်၊ Rဇာနည်၊ ရင်ဂို၊ ဟဲလေး၊ ရဲတိုက်၊ မီးမီးခဲ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ သျှီ၊ ချစ်သုဝေ၊ သံသာဝင်းနှင့်အနဂ္ဂ တို့ပါဝင်သော
အနုပညာရှင်များသည် ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် မရမ်းကုန်း NLD
“ဒီနေ့လည်းပြည်ခိုင်ဖြိုးက ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံသုံးပြီး သူတို့ပါတီဝင်တွေအစည်းအဝေးလုပ်တယ်၊နောက်သူတို့မဲ ဆွယ်ဖို့ခေါ်ထားတဲ့ အခြားမြို့နယ်ကပါတီဝင်တွေကိုလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တည်းခိုင်းတယ်ဒါက နိုင်ငံရေးအတွက်သာသနာ့နယ်မြေအသုံးပြုတာပဲ”ဟု(NLD)မော်လမြိုင်အောင်နိုင်ရေး
ကော်မတီရုံးမှ ပြန်ကြား ရေးတာဝန်ခံဦးကိုကိုဇော်ကပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်း မဲဆန္ဒတခုမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ရွာလုံးကျွတ် မဲဝယ် ( အသံဖိုင် )
ပဲခူးတိုင်း မဲဆန္ဒတခုမှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ရွာလုံးကျွတ် မဲဝယ်တာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြိုင်ဘက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း က စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင် မြို့နယ် ပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ရွာတချို့မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မဲတမဲကို ဆန်တအိတ်၊ ငွေ ၂ သောင်းနဲ့ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ လိုက်ဝယ်ခဲ့တာကို သက်သေအထောက်အထားတွေနဲ့ တကွ ကော်မရှင်ကို တင်ပြထားတယ်လို့ အန်အယ်ဒီအမတ်လောင်း ဦးစိန်ထွန်းက ပြောပါတယ်၊ အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ ညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊
ရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလ ပါတီတချို့သဘောထား ( အသံဖိုင် )
ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုအံ့ဘုန်းမြတ်က ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တရက်အလို မတ် ၃၁ ရက်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြိုကာလ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေ့ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုအံ့ဘုန်းမြတ်ကို ကိုအေးနိုင်က မေးမြန်းထားပါတယ်။
ABSDF နဲ့ အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ ရက်ရွှေ့တယ် တဲ့။
မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆း၀၀ နာရီဝန်းကျင် ထွက်လာတဲ့ ကြေညာချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကော့မှူးမြို့နယ်ကို ဒီညနေ တညအိပ်ရောက်ရှိလာတာကို ကြိုဆိုကြတဲ့ ဒေသခံလူထုနဲ့ မဲရုံနေတွ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံရှုခင်းတွေကို စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ (Photos: AP)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၀ါးသိင်္ခရွာသို့ ညနေ ၆နာရီ ၄၅မိနစ်အချိန်တွင် ချောမောစွာရောက်ရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၀ါးသိင်္ခရွာသို့ ညနေ ၆နာရီ ၄၅မိနစ်အချိန်တွင် ချောမောစွာရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း7Day News သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။
အခုတော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများ အာရုံကျနေကြတဲ့အတွက် ဒီရွာကို ကမ္ဘာက သိသွားပါပြီ။ ဒီရွာမှာ ရှိတဲ့ အိမ်တအိမ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ဒီတည ညအိပ်နေထိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူသူမ၏မိသားစုဆရာ ၀န်ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းသည်ယနေ့ကော့မှူးခရီးစဉ်သို့လိုက်ပါသွားခြင်းမရှိကြောင်း ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက7Day News သို့ပြောကြားသည်။
- နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ကျေးစာဥကျေးရွာ
ကြိုတင်မဲပေးနိုင်သူ ၁၃ ဦးရှိသည့်အနက် မဲပြားငါးပြားသာယူဆောင်လာပြီး ကျန်ရှစ်ဦးမှာ မဲပြားအပိုမပါသောကြောင့် မဲမပေးခဲ့ရဟုပြောသည်။
“ငါတို့က NLD ကိုမဲပေးမယ်။ ကြိုတင်မဲပေးမယ်ဆိုတော့ မဲပြားမပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့နေရာကိုတိုင်လို့ပြောတယ်"
ဟု ကြိုတင်မဲပေးနိုင်သည့်စာရင်းတွင်ပါရှိသော်လည်း ကြိုတင်မဲမပေးခဲ့ရသည့် ဒေသခံတစ်ဦးကပြောသည်။
- နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိ၊ ရှားတောရွာ
မြို့နယ်ကော်မရှင်မှ လူသုံးဦးကြိုတင်မဲများလိုက်လံကောက်ယူရာတွင် မည်သည့်ပါတီကို မဲပေးရမည် မသိသောသူများကို ခြင်္သေ့ဘေးတွင် အမှန်ခြစ်ရန် ကော်မရှင်မှလူများက တိုက်တွန်းကြောင်း ဒေသခံများကပြောသည်။
ကြိုတင်မဲပြားပေါ်ရှိ ခွပ်ဒေါင်းတံဆိပ်ဘေးတွင် မှင်ရာမထင်အောင် ဖယောင်းသုတ်ထားသည် ဟု ကြိုတင်မဲပေးနေသည့် ဒေသခံများကပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေကြည်-၂ မဲဆန္ဒနယ် (ငါးသိုင်းချောင်းမြို့နယ်)တွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်၏လုပ်ဆောင်ပြောဆိုမှုများတွင် ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်မှုများ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း အင်န်အယ်လ်ဒီ အောင်နိုင်ရေး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကြိုတင်မဲသွားရောက်ကောက်ခံရာတွင် လိုက်ပါကြည့်ရှူခွင့်တောင်းခံရာ ရပ်/ကျေးကော်မရှင်များက ခွင့်မပြုကြောင်းNLD အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။
''ဒါကြောင့် ရပ်/ကျေးတွေက ကောက်ခံတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေကို တော်တော်သံသယဖြစ်နေပါတယ်''ဟု NLD အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။
မြို့နယ်ကော်မရှင်အား သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာကြည့်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပြောသော်လည်း အောက်ခြေသို့ ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိသောကြောင့် ရပ်/ကျေးကော်မရှင်များက ခွင့်မပြုကြောင်း ၎င်းကြုံတွေ့ခဲ့ပုံကိုပြောသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများကို ကြိုတင်မဲ စိစစ်ခွင့် ရှိမရှိနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော်မရှင်ဥက္ကဌ တစ်မျိုးစီ ပြောနေကြသလို အောက်ခြေ ကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်တွင်လည်း တစ်နေရာ တစ်မျိုးစီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများကပြောသည်။ ။
မနက်ဖြန်ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့အထိအတည်ပြုပြီးသည့်မဲစာရင်းများတွင် ထပ်မံပြင်ဆင်၊ဖြည့်စွတ်နှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် ပခုက္ကူမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ပခုက္ကူမြို့နယ်ရပ် ကွက်၊ကျေးရွာ
ထို့ကြောင့် ပခုက္ကူမြို့နယ်ရပ် ကွက်၊ကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအားလုံးကမတ်လ ၂၄ရက်နောက်ပိုင်း အတည်ပြုပြီးသော မဲစားရင်းမှအပ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သည်များလုံးဝမပြုလုပ်ရန်နှင့်တိကျစွာလိုက်နာရန်အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည်
ငွေကြေး အခက်အခဲကြောင့် ပါတီအချို့ ကြိုတင်မဲကြည့်ဖို့လူအင်အားမလုံလောက်
မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကို ဦးစားပေးနေရခြင်းနှင့် ငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့် ကြိုတင်မဲကောက်ခံခြင်းကို စောင့်ကြည့်ရန် လူအင်အား လုံလောက်စွာ မသုံးနိုင်ကြောင်း ပါတီတာဝန်ရှိသူတချို့က ပြောသည်။
“စည်းရုံးရေးဆင်းနေရတဲ့အတွက် ကြိုတင်မဲအတွက်ကိုတော့ လူအလုံလောက် မသုံးနိုင်ဘူး။” ဟု မန္တလေးတိုင်း မဟာအောင်မြေ မဲဆန္ဒနယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) အမတ်လောင်း ဦးအုန်းကြိုင်က ပြော သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ဥက္ကဌ ဦးသိန်းညွန့်ကမူ “ကျွန်တော်တို့မှာ အဲလောက်လုပ်ဖို့ ငွေကြေးမရှိဘူး။ မနေ့ကလည်း ကြိုတင်မဲအတွက် မစောင့်နိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ခံ ဦးအောင်သိန်းလင်းကမူ ၄င်းတို့ပါတီအနေဖြင့် ကြိုတင်မဲပေးသည့်နေရာ တစ်နေရာကို ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးစီ သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ် အဖြစ် ကောမူးမြို့ သို့ထွက်ခွါ
ရန်ကုန်မြို့မှ ကော့မှူးသို့သွားရောက်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားသောဦးခွန်သာမြင့်ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသ တင်းများကြားထားသည့်အတွက်သက်ဆိုင်ရာသို့အကြောင်းကြားထားကြောင်းနှင့်ယခုအချိန်ထိထိုသတင်းထွက်ပေါ်သောနေရာများတွင် စောင့်ဆိုင်းနေသည်ကိုမတွေ့ရသေးကြောင်းဖြေကြားသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်ပါ လာသောယာဉ်တန်းကို စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရန် ကံဘဲ့လမ်းဆုံနှင့် ဘုရားငုတ်တိုလမ်းဆုံတို့တွင် စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မည်ဆိုသည့်သတင်းများရရှိထားသည့်အတွက်လည်း လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်လျှက်ရှိကြောင်း ယာဉ်တန်းတွင်လိုက်ပါနေသော ဦးခွန်သာမြင့်ကပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ကော့မှုးမြို့နယ်ထဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မတ်လ (၃၀)ရက်နေ့ လှည့်လည် မဲဆွယ် စည်းရုံးတဲ့အခါမှာ ဒေသခံ တွေကို ဆဲဆိုရန်စတာတွေ ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ကော့မှုးအန်အယ်ဒီ အောင်နိုင်ရေးတာဝန်ခံ ဦးအေးသိန်းက ပြောပါတယ်။မော်တော်ကား အစီးနှစ်ဆယ်လောက်နဲ့ လှည့်လည်ပြီး ဒေသခံတွေကို ၇န်စပြုမူပြောဆိုနေသူတွေဟာ ကော့မှုးက မဟုတ်ဘဲ တခြားဒေသကလူတွေကို နေ့တွက် တနေ့ကျပ်သုံးထောင်ပေး ခေါ်ယူလာသူတွေဖြစ်တဲ့ အ ကြောင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပျက်အောင် ကြံစည်ပြုမူနေကြတဲ့အကြောင်းလဲ ပြောပါတယ်။ ကော့မှုးက ၀င်ပြိုင်မယ့် ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မတ်လ၃၁ရက်ညမှာ ကော့မှုးမြို့နယ်၊ ၀ါသင်္ခ ကျေးရွာမှာ လာရောက်ညအိပ်ပြီး၊ ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာ မြို့နယ်ထဲ မဲပေးသူတွေကို လိုက်လံ အားပေးမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေများမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် ဧပြီလ ၁ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်ပြန်မှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ရွှေဂုံတိုင်အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့တွင် LED ဆိုင်းဘုတ်တခု ယနေ့ တပ်ဆင်ထားပြီး အဆိုပါဆိုင်းဘုတ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေအသီးသီးမှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီပြန်ကြားရေးဌာနက ဆိုသည်။
မဲဆန္ဒ္ဒနယ်မြေအသီးသီးရှိ ပါတီပြန်ကြားရေးဌာနများအနေဖြင့်လည်း အဖွဲ့ချုပ်ရုံး (ဗဟို)သို့ တနာရီခြားတကြိမ် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီသည် တနင်္ဂနွေနေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၇ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၅ နေရာ၊ တိုင်းဒေသကြီး(သို့) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂ နေရာ စုစုပေါင်း ၄၄ နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
့(၃၀-၃-၂၀၁၂)နံနက် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ် ခြံအမှတ်(၅၄)တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သူမနှင့်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းထောက်များကိုတွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ-ဂျေမောင်မောင်၊အမရပူရ)
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက် မတိုင်ခင် ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေဟာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်ပွဲတခု ဖြစ်ဖို့အတွက် လက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ မဟုတ်ပါဘူးလို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း နည်းလမ်းမကျတာတွေ၊ တရားမ၀င်လုပ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့က လုပ်သင့်သလောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မလုပ်တာကလည်း စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ရန်ကုန်မြို့ကနေ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်ရဲ့ ကားကို လေးဂွဖြင့် အပစ်ခံရသဖြင့် ကားရှေ့လေကာမှန်ကွဲ(photo.Burma vj medianetwork)
အတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ တောင်ငူက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘဲ သူ့ရဲ့ကားကိုပဲ မှန်သွားခဲ့ပါတယ်။
“ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တရားမျှတမှုတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တရက်ထဲအပေါ်မှာပဲ မူတည်မနေဘဲ ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်ခင် ဖြစ်ပျက်တာတွေပေါ်မှာလည်း မူတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လေ့လာသူတွေ ထည့်သွင်း စဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လအတွင်း ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဆိုတာကို လေ့လာသူတွေအနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသမျှ လေ့လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါကြောင်း” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇဗ္မူသီရိမြို့နယ်ရှိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမှ နိုင်ငံရေးသမားများ တည်းခိုခွင့် မပြုနိုင်ကြောင်းပြောဆို
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဇဗ္မူသီရိမြို့နယ်ရှိ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာတွင်တည်းခိုလျှက်ရှိသော မိုးကုပ်မြို့မှ NLD ထောက်ခံသူ ၁၈ဦးအား ဧည့်ရိပ်သာတာဝန်ရှိသူက နိုင်ငံရေးသမားများ တည်းခိုခွင့် မပြုနိုင်ကြောင်းပြောဆိုကာ ည၁၀နာရီခွဲအချိန်၌ အခြားတည်းခိုခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အထက်ပါ NLD ထောက်ခံသူ ၁၈ ဦးသည် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာသို့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ညနေတွင်ရောက်ရှခဲ့ပြီး တစ်ညတည်းခိုကာ ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၀နာရီခွဲအချိန်တ...ွင် ပြောင်းရွှေ့ စေခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်း ၁၈ဦးသည် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းသူ၏ မိတ်ဆွေများဖြစ်သကဲ့သို့ ဦးမင်းသူ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲများတွင် အင်အားဖြည့်ကူညီရန် ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်။
" ကိုယ့်အနေနဲ့ ဧည့်ရိပ်သာကတာဝန်ရှိသူကို ဖုန်းဆက်ပြောတယ်။ အချိန်ကလဲည ၁၀ နာရီခွဲဖြစ်နေတော့ လူမှုရေး ရှု့ထောင်ကကြည့်ပြီး တစ်ညတော့ တည်းခိုခွင့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ တာဝန်ရှိသူက အထက်က ညွှန်ကြားထားလို့ မထားရဲဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်။ အစ်ကိုက အထက်ကဘာညွှန်ကြားထားလဲလို့မေးတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ တည်းခွင့်မပြုဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ ဧည့်ရိပ်သာထဲမှာ တည်းခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီလှုပ်ရှားသူတွေက ရာနိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးကြည့်တယ်။ တစ်ညတော့ တည်းခိုခွင့်ပြုပါလို့ ထပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သူက နိုင်ငံရေးသမားတွေတည်းမယ်ဆိုရင် ကြိုပြီးခွင်ပြုချက်ယူရတယ် ဒါကြောင့်ခုချက်ခြင်း ခွင့်ပြုလို့ မရပါဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။" ဟု ဇဗ္မူသီရိမြို့နယ် NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတာဝန်ခံ ဦးစိုင်းဝင်းနိုင်ဦး
၄င်း ၁၈ဦး သည် ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၀ နာရီခွဲအချိန် စည်ပင် ဧည့်ရိပ်သာမှ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး အထက်ပါ ဦးစိုင်းဝင်းနိုင်ဦး နေအိမ် ၌တည်းခိုလျှက်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းတို့သည် ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ထိ တည်းခိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းကိစ္စနှင့်ဆက်လျှင်း၍ popular News Journal ကစည်ပင်ရိပ်သာသို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ " တည်းခိုခွင့်မပြုလိုက်တာမှန်ပါတယ်။ သူတို့တည်းတုန်းကတော့
သာမန်ခရီးသွားတွေလို့ထင်မိပါတယ်။ ၂၈ ရက်နေ့ရောက်တော့မှ NLD ကလူတွေဖြစ်နေတယ်။ NLD ကလူတွေဖြစ်တာလည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တရားဝင်အသိပေးပြီးတည်းဖို့တော့လိုပါတယ်။ အခုဖြစ်သွားတာက ၂၈ရက်နေ့မှာ NLD စည်းရုံးရေးကားတွေနဲ့ ဧည့်ရိပ်သာအတွင်းဝင်လာပြီး ရပ်သာဝင်းပတ်လမ်းတွေထဲ ကားပါတ်မောင်ကြတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်တာကိုတော့ ဘယ်ပါတီကိုမှ ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်နောက်နေ့တွေမှာ အဲ့ဒီလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဆက်တည်းဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ခွင့်ပြုလို့မရဘူးဆိုတာ ပြောလိုက်တယ်။ စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ တည်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က
ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးမှ လက်ခံလို့ရတဲ့စည်းမျဉ်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေဟာလဲ ခုမှ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့တာဝန်မထမ်းဆောင်ခင်ကတည်းက ရှိနေတဲ့စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေပါ။
အခုကျွန်တော်ဒီမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ ခုနှစ်လရှိနေပြီဆိုတော့ ဒီစည်းကမ်းထုတ်ထား ခုနှစ်လရဲ့အထက်မှာပဲရှိနေပါတယ်။ ခုလိုတည်းခိုခွင့်မပြုလိုက်တာက အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ ငြိစွန်းနေတာရယ်။ ဧည့်ရိပ်သာအတွင်း ပတ်လမ်းထဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ အလံတင်ကားတွေ လှည့်လည်လို့ဖြစ်ပါတယ် " ဟု ၄င်းဧည့်ရိပ်သာ၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
စွမ်းရဲထွတ် + စံကျော်(Popular Myanmar News Journal)
လေးဖြူအကြောင်း ဖော်ပြခဲ့တာကို အနူးညွတ် တောင်းပန်တယ် လို့ Envoy ဂျာနယ်က သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာထည့်ထားတဲ့အကြောင်း Facebook မှာ တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းထောက်က ၀၉ ၈၀၃ ၀၄၂၇ ကို ဖုန်းဆက်မေးတယ်၊ တဘက်က ပြန်လည်ဖြေကြားတာတွေကို လေးဖြူရဲ့စကားတွေအဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ တဲ့။
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုသင့်တဲ့ လေးဖြူရဲ့ ကြော်ငြာ_ http://www.irrawaddyblog.com/2012/03/envoy.html
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြိးအဖြစ် တာဝန်မပေးခင် ကတည်းက မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး လက်ထက်ကတည်းက တပ်မတော်ဂေါက်ကွင်း (ရန်ကုန် ) တွင် Golf Carry ကျောနံပတ် ၀၄၉ မသန်းသန်းညွန့် နှင့် ညှိစွန်းခဲ့ပြီး တိုက်ခန်း ရှစ် ခန်း ၊ အင်းစ်ိန်ဈေးတွင် ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်၊ ၂၀၁၁ နှစ်ဆန်း ပိုင်းက ပဲခူးသစ် ထုတ်လုပ်ရေး - ရောင်း/ စက်သို့ မသန်းသန်းညွန့် နာမည်နှင့် သစ်ရောင်းချပေးရန်၊ ဦးဝင်းထွန်း၏ လက်မှတ်ဖြင့် မဖြစ်မနေရောင်း ချပေးရန် မှတ်ချက်ရေးထိုး ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယခု မသန်းသန်းညွန့် အင်းစိန် ဈေးမှ ရွှေဆိုင်ကို ရောင်းချပြီး ဦးဝင်းထွန်း နှင့် ညှိစွန်းနေသည့် အကြောင်း ဖေါ်ကောင်လုပ် နေသော သူမ၏ခင်ပွန်းကို Taxi ကားတစ်စီး ၀ယ်ပေးထားရကြောင်း သိရသည်။ ဂေါက်ကွင်းတွင်လည်း သန်းသန်းညွန့်ပိုင် ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ပေးထားသည် ဟုသိရသည်။
လက်ရှိပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဖြစ်လာသည့်အခါ ဦးဝင်းထွန်းသည် Golf Carry မသန်းသန်းညွန့်နှင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ ခြင်းမရှိတော့ပဲ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် ရုပ်ရှင် မင်းသမီးများအတွက်ပါ ပံ့ပိုး ညှိစွန်းမှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၁၁-၁၀-၂၀၁၁ ရက်စွဲဖြင့် သစ်ကုန်သည် မဟုတ်သူ မင်းသမီး နန်းဆုရတီစိုးကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း က whole sale ဖြင့် ကျွန်းသစ် တန် ၅၀၀ ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းရောင်းချခွင့် ပါမစ်အတွက် တစ်တန်လျှင် ဒေါ်လာ ၅၀၀ နှုန်းဖြင့် မင်းသမီး နန်းဆုရတီစိုး က အမြတ်ရခဲ့ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်းနှစ်ထောင် ရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်း သိန်းနှစ်ထောင်ဖြင့် ၃၀-၁၀-၂၀၁၁ နေ့တွင် နန်းဆုရတီစိုးက Hotel တစ်ခုတွင် ဂျာနယ် သတင်းထောက်များနှင့် မီဒီယာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ကာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက အသံစီးရီး ထွက်ခဲ့သည့် သူမ၏ မိုးမမြင်လေမမြင် တေးစီးရီးကို MTVနှင့် VCD ချပ်များထုတ်ရန် ကြေငြာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူမ၏ မိုးမမြင်လေမမြင် တေးစီးရီး VCD ချပ်များထုတ်ဝေရန် စီစဉ်ပြီးသည်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းနှင့် မင်းသမီး နန်းဆုရတီစိုးတို့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ချိန်းဆို တွေ့ဆုံကာ အပန်းဖြေခဲ့ကြကြောင်း သိရသည် ။
လက်ရှိ အကယ်ဒမီ မင်းသမီး သက်မွန်မြင့်အား တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ငါးထောင်နှုန်းဖြင့် တစ်နှစ်စာ ဒေါ်လာ ခြောက်သောင်း ပံ့ပိုးပေးလျှက်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အထက်အဆင့် လူကြီးများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအတွက် ပြုလုပ်သော ဦးဝင်းထွန်း၏ ပါတီပွဲများတွင် ပင်တိုင်ဧည့်ခံပေးရန် စီစဉ်ထားသည့်အတွက် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကို စာရင်းစစ်မရှိပဲ ထင်တိုင်းကြဲ ခွင့်ရအောင် ဆောင်ရွက်ထားသည်။
ဒီမိုဝေယံ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် လေးဘဏ်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ May Bank တို့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
SIGNING CEREMONY ON MAYBANK MONEY EXPRESS between MayBank & AYA BANK,AGD BANK,CB BANK, KBZ BANK
မြန်မာနိုင်ငံ မှ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် အပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိကဘဏ် လေးဘဏ်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ May Bank တို့မှ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ငွေလွှဲပို့နိုင်ရေးအတွက် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် (၂၀.၃.၂၀၁၂) တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ May Bank ရုံးချုပ်တွင် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ AYA Quick Remit Money Transfer ဖြင့် ပြည်ပငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုပေးနေ သကဲ့သို့ ယခုအခါ May Bank မှလည်း ငွေလွှဲပို့နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ပထမဆုံး (၃)လအတွင်း လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် ၀န်ဆောင်ခမပေးရဘဲ ငွေလွှဲပို့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Launching Ceremony of AYA Q-Remit Remittance Malaysia -Myanmar
— at Malaysia.
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးသော ဧရာဝတီဘဏ် ပြည်ပငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ မှ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ယုံကြည်စိတ်ချမြန်ဆန်စွာငွေလွှဲပို့နိုင်ပြီ။
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ Money Changer Counter အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁၆၆)၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး အရှေ့ဘက်တန်းတွင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားသည် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ အစောပိုင်းက အာရှသို့ ခရီးထွက်ခဲ့ပြီး ယင်းခရီးစဉ်တွင် ဆက်ဆံရေး တင်းမာနေသည့် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြား အခိုင်အမာပြုထားသည့် နယ်စပ်ဇုန်သို့လည်း သွားရောက်မည်ဟု သိရသည်။
သမ္မတနှင့် ၎င်း၏လက်ထောက်များကို တင်ဆောင်လာသည့် Air Force One ၀ါရှင်တန်မြို့ပြင်ရှိ အင်ဒရူး လေတပ်စခန်းမှ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီတွင် ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။
အိုဘားမားသည် တောင်ကိုရီးယားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အမေရိကန်စစ်သား ၂၈၅၀၀ အနက် သေဆုံးခဲ့သည့် စစ်သားအချို့ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။ ထို့ပြင် ပြန်လည်အလေးထားလာသည့် အာရှဒေသတွင် အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်သော တောင်ကိုရီးယား၏ အင်အားကိုလည်း ဂုဏ်ပြုလိုသည်ဟု ဆိုသည်။
အိုဘားမားသည် ဆိုးလ်တွင် ပြုလုပ်မည့် ၅၃ နိုင်ငံ နျူထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတလီမြောင်ဘတ်နှင့် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်တောင်နှင့် ပိုမိုအရေးကြီးသည့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း အရာရှိများက ပြောကြားခဲ့ သည်။ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရာထူးမှ အနားယူတော့မည့် ရုရှားသမ္မတ မက်ဗီဒက်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် အိုဘားမားသည် တူရကီနှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာစာနယ်ဇင်း သမဂ္ဂ (Myanmar Journalists Union) ဖွဲ့စည်းရေး တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်
First Eleven Sports ဂျာနယ် စတင်ထုတ်ဝေစဉ်က အယ်ဒီတာချုပ်အဖြစ်
မြန်မာစာနယ်ဇင်း သမဂ္ဂ (Myanmar Journalists Union) ဖွဲ့စည်းရေး တတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းအကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပွဲကို မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ City Star ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲ ကာလမှာ Freedom of Expression ကို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ က ခုခံကာကွယ် စောင့်ရှောက်ချင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သတင်းရယူတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး၊ အနှောင့်အယှက် အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကို အဓိက ထားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ အဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ ပါဝင်လာမှာ ကတော့ မီဒီယာ လောကသားတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်ပါပဲ။ အဲဒီကျင့်ဝတ်တွေ ကိုလည်း ပိုမိုဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့မီဒီယာလောကသား တွေဖြစ်ဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်”ဟု Myanmar Journalists Union ပေါ်ပေါက် လာရေးအတွက် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူကို ဇော်သက်ထွေးက ပြောပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်သုံးရပ်နှင့် ဆောင်ပုဒ်နှစ်ခုအား တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar Journalists Union အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် သုံးရပ်ထားပြီး ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကာ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက် သုံးရပ်မှာ (၁) ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့် အများပြည်သူ တို့၏ လက်တွေ့ဘ၀အား အကျိုး ကျေးဇူး ဖြစ်စေနိုင်သော သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အား ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် (Protection of Freedom of Press) ၂။ အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား နှင့် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အဖြစ် တည့်မတ် စွာရပ်တည်နိုင်ရေး အတွက် ဂျာနယ်လစ်များ၏ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်လှုပ်ရှား သတင်းရယူ ရေးသား ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး များစွာ အရေးပါသည့် အတွက် ဂျာနယ်လစ် အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် (Protection of Journalist)၊ ၃။ ဂျာနယ်လစ်များ အချင်းချင်းကြားတွင် ဖြစ်စေ၊ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် အများပြည် သူအကြား၌ဖြစ်စေ၊ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် အခြားမဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ် အကြား၌ဖြစ်စေ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ၎င်းပြဿနာများကို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသွားရန်နှင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်သွားရန် တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေး၌ပင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဆောင်ပုဒ်နှစ်ခုမှာ To Protect The Freedom of Expression နှင့် To Defend The Rights of All Journalists တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
Myanmar Journalists Union ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ပထမအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၁၈ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုပြုလုပ်သော တတိယအကြိမ်သို့ အထက် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းထောက်များ ကိုယ်စား မန္တလေးမြို့မှ သတင်းသမားအချို့ အပါအ၀င် အဆိုပါ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းမီဒီယာအသီး သီးမှ ဂျာနယ်လစ် ၄၅ ဦးခန့်တက် ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
စတုတ္ထအကြိမ် လုပ်ငန်းအကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို သင်္ကြန်အပြီး ဧပြီလအတွင်း ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကာ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအား အသေးစိတ် တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေး အပြီး ပြုလုပ်မည့် နောက်တစ်ကြိမ် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သတင်းသမားအားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ပြုလုပ်မည့် Mass Meeting ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကာ ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်မှုဖြင့် အဖွဲ့ ၏ ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးချယ်ပြီး ထားရှိသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အဖွဲ့ကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားစေမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများ အသင်း ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများ အသင်း ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကို (ကိုကို-စက်မှုတက္ကသိုလ်)အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အတူ အခမ်းအနားတစ်ခု၌ တွေ့ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံစာပေနှင့် စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာများ အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာ ဆရာများအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပုံ နှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသူများ အသင်းဟူ၍ အသင်းသုံးသင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများ အသင်းဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီတွင် ဦးဆောင် နာယကများအဖြစ် ဦးစိုးသိမ်း(မောင်ဝံသ)၊ ဦးကိုကိုလှိုင်(ကိုကိုလှိုင်)၊ ဦးဝင်းငြိမ်း (၀င်းငြိမ်း)၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဖိုးသောကြာ (ခေတ်၊ မိုး)၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဦးကိုကို(ကိုကို-စက်မှုတက္ကသိုလ်) တို့က ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မတီဝင် ၂၃ ဦးပါဝင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအသင်း သုံးသင်းအနက် မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာများ အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများအသင်း တို့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိသူများ အသင်းကို စွယ်စုံမီဒီယာဂရုမှ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသူများ အသင်းနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာများ အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများ အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းတို့ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဆိုပါအသင်းသုံးသင်းစလုံးကို သုံးလအတွင်း ဖွဲ့စည်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယနေ့ သတင်းဂျာနယ်များတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကြောင်း သောင်းသောင်းဖြဖြ ရေးသားဖော်ပြနေကြသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့စဉ်က ယခုလောက် စိတ်ပါဝင်စားမှု တက်ကြွမှု မရှိခဲ့ပေ။ လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်ဝက် အတွင်းကျင်းပခဲ့ကြသော တင်မြှောက် ပွဲများကဲ့သို့ အာဏာရပါတီသည် မဲ နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ နောက်ဆုံးတွင် အနိုင်ရမည်ဟု အတွေ့အကြုံအရ သိနားလည်ထားကြသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ထူးခြားပြောင်းလဲလာမည် မထင်ခဲ့ကြ။ သို့ဖြစ်၍ ၀တ်ကျေတန်းကျေသာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ယခုကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူများက စိတ်ပါဝင်စား တက်ကြွလှုပ်ရှားလာကြခြင်းမှာ ဒီမိုကရေစီအရိပ်အယောင် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေမည်။
အခုလို ဒီမိုကရေစီအရေး လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများအကြောင်း ဖတ်ရ၊ ကြားရတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၅၆ နှစ်က ဖဆပလအစိုးရ လက်ထက်တွင် ကျင်းပခဲ့သော လွှတ်တော်အမတ် ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ပြန်ပြောင်းသတိရမိသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လူမျိုးစုံ၊ ရောင်စုံ သူပုန်များ ထကြွသောင်းကျန်းနေချိန် ၁၉၅၆ ခုနှစ် ဖဆပလ အစိုးရလက်ထက် ကျင်းပသော ပါလီမန် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း ဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က ကျွန်တော်သည် ဟံသာဝတီခရိုင် တွံတေးမြို့အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် အထက်တန်းပြဆရာ SAT ဖြစ်၍ ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ပါလီမန်အမတ် လောင်းအဖြစ် အရွေးခံသူ နှစ်ဦးရှိသည်။ တစ်ဦးမှာ ဖဆပလပါတီမှ အမတ်လောင်း ဦးသန်းစိန်ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ အတိုက်အခံပါတီမှ မော်လ၀ီဦးစံရှားဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် တာဝန်ယူရသည့် မဲရုံမှာ တွံတေးမြို့မှ ခုနစ်မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော တွံတေး တူးမြောင်းနဘေးရှိ ရွာကြီးနှစ်ရွာအတွက်ထားရှိသော မဲရုံဖြစ်သည်။ မဲရုံကိုတူးမြောင်းနံဘေးတွင် ကပ်လျက်ဆောက်ထားသည်။ ရွာနှင့်မဲရုံမှာ မိုင်ဝက်သာသာ ကွာဝေးသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ တွင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း မော်တော်နှစ်စီးနှင့် မဲရုံတည်ရှိရာသို့ ထွက်ခဲ့သည်။ ပထမမော်တော်တွင် မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအရာရှိ၊ မဲစာရေးနှစ်ဦး၊ အမတ်လောင်း ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၊ ကျေးရွာလူကြီးနှစ်ဦး၊ ပြည်သူ့ရဲ နှစ်ဦးလိုက်ပါပြီး ဒုတိယမော်တော်တွင် တပ်မတော်မှ ဗိုလ်တစ်ဦးအုပ်ချုပ် သည့် တပ်စိတ်တစ်စိတ် လိုက်ပါစောင့်ရှောက်သည်။ မဲရုံသို့ နံနက် ၆ နာရီတွင် ရောက်ရှိသည်။ မဲရုံတွင် ကြိုတင်ရောက်ရှိနေသော ကျေးရွာလူကြီးများက ဆီးကြိုပြီး မဲရုံကိုလွှဲ ပြောင်းပေးသည်။ မဲရုံလုံခြုံမှု၊ မဲပုံး၊ မဲပြား၊ မဲစာရင်းမှန်ကန်မှု စသည့် စစ်ဆေးပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း နံ နက် ၇ နာရီတွင် မဲရုံဖွင့်သည်။
နံနက် ၉ နာရီထိုးပြီ။ မဲရုံဖွင့်ထားသည်မှာ နှစ်နာရီ ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မဲပေးမည့်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ရောက်မလာပါ။ သို့သော်လည်း ရွာကြီးနှစ်ရွာကြားတွင် ဖုန်တထောင်းထောင်းနှင့် လူအုပ်ကြီး ရွှေ့လျားနေသည်ကို မြင်နေရပါသည်။ လူတွေမြင်နေရပြီး မဲပေးမည့်သူ တစ်ယောက်မျှ မရောက်လာသဖြင့် အဆိုပါ ရွာနှစ်ရွာမှ ရွာလူကြီးနှစ်ဦးအား မေးမြန်းကြည့်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ အမေးကို မသိသကဲ့သို့ ဘာသိဘာသာ နေသည်။ ဖြေလိုစိတ်ရှိ ဟန်မတူပါ။ ဤတွင် ဖဆပလ အမတ်လောင်းမဲကိုယ်စားလှယ်က ယခုမြင်နေရသည့် လူအုပ်ကြီးမှာ ထိုရွာ နှစ်ရွာသို့ သူပုန်များရောက်လာပြီး မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း ခေါ်ထုတ်၍ အတိုက်အခံကို မဲပေးရန် ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပါသည်။
နံနက် ၉း၃၀ နာရီခန့်တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ တန်းစီရောက်လာပြီး မဲ ပေးကြပါသည်။ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ညနေ ၃ နာရီတွင် မဲပေးမှု ပြီးဆုံးသွားသည်။ မဲပုံး၊ မဲစာရင်း အပိုမဲများကို စနစ်တကျ ချိပ်ပိတ်ပြီး တွံတေးသို့ ပြန်ခဲ့သည်။ တွံတေးမြို့သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ဖဆပလ အမတ်လောင်းကိုယ်စားလှယ်၏ တင်ပြချက်အရ ဖဆပလက အမတ်လောင်း ဦးသန်းစိန်က သူပုန်များ ခြိမ်းခြောက်ကြိမ်းမောင်း၍ မဲ ပေးခိုင်းသော ကျွန်တော် တာဝန်ယူရသည့် မဲရုံမှမဲများသည် တရားမ၀င်ကြောင်း။ သို့ဖြစ်၍ ကန့်ကွက်ကြောင်း မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော် မရှင်သို့ ကန့်ကွက်စာတင်သည်။ ထို့အတူ တွံတေးမြို့ပေါ်မှ မဲရုံနှစ်ရုံတွင်လည်း အာဏာရပါတီ ဖဆပလ၏ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၊ လက်နက်ကိုင် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များက ဖဆပလကို မဲပေးရန် အာဏာဖြင့် ခြိမ်းခြောက်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤမဲရုံများမှ မဲများသည် တရားမ၀င်ကြောင်း အတိုက် အခံပါတီ အမတ်လောင်း မော်လစီ ဦးစံရှားက ကန့်ကွက်စာတင်သည်။ အပြန်အလှန် ကန့်ကွက်ကြသည်။
ပြည်သူတို့သည် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး တညီတညွတ်တည်း ရှိမှုကို လိုလားကြသည်။ အနိုင်အထက် စေခိုင်းခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းတို့ကို မလိုလားကြ။ သို့ဖြစ်၍ လျို့ဝှက်မဲပေးရသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့၏ ဆန္ဒမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပြည်သူတို့၏ အဖြေဖြစ်သည်။
ကန့်ကွက်ခံရသော မဲရုံသုံးရုံမှ မဲရုံမှူးများ မဲပုံးများနှင့်အတူ ဟံသာဝတီခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လိုက်ကြရသည်။ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ရန်ကုန် - ကမ်းနားလမ်း ပုလိပ်ရုံးကြီးတွင် ရုံးဖွင့်ထားသည်။ ခရိုင်ရုံးတွင် ကျွန်တော် တာဝန်ကျသော မဲရုံမှ မဲပုံးများကို နှစ်ဖက် ကာယကံရှင်များရှေ့တွင် ပြသဖွင့်လှစ် ရေတွက်သည်။ ကန့်ကွက်သူ ဖဆပလ အမတ်လောင်း ဦးသန်းစိန်က မဲ ၉၀ ရာခိုင် နှုန်းရပြီး ကန့်ကွက်ခံရသူ အတိုက်အခံ မော်လ၀ီ ဦးစံရှားက မဲ ၁၀ရာ ခိုင်နှုန်းသာရရှိသည်။ တွံတေးမြို့ပေါ် မဲရုံနှစ်ရုံကို ဖွင့်ဖောက်ရေတွက် သောအခါ ကန့်ကွက်သူ အတိုက်အခံ အမတ်လောင်း၊ မော်လ၀ီဦးစံရှားက မဲ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကန့်ကွက်ခံရသူ ဖဆပလ အမတ်လောင်း ဦးသန်းစိန် က ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရရှိသည်။
ပေါ်ထွက်လာသော ရွေးကောက်ပွဲ မဲရလဒ်ကိုကြည့်ပြီး တအံ့တသြ ဖြစ်မိသည်။ အညိုရောင်ဒေသဟု သတ်မှတ်ထားသော ရောင်စုံသူပုန်များ ကြီးစိုးသည့် ကျေးရွာများမှ ပြည်သူများသည် လက်ရှိအာဏာရပါတီ အစိုးရကို ထောက်ခံမဲပေးပြီး အဖြူရောင်ဒေသဟု သတ်မှတ်ထားသော မြို့ပေါ်မှ ပြည်သူများသည် လက်ရှိ အာဏာရပါတီအစိုးရကို မထောက်ခံ အတိုက်အခံကို မဲပေးကြသည်။ အထင်နှင့် အမြင်ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရှိရမည်။ အကြောင်းမဲ့ဖြစ်သော အကျိုးမရှိဟု ရှင်တော်ဗုဒ္ဓကဟောခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ရောင်စုံသူပုန်တို့ ကြီးစိုးရာ အညိုရောင်ဒေသများတွင် ပြည်သူများသည် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်မရှိ၊ ဆက်ကြေး၊ ရိက္ခာတောင်းသည့်အတိုင်း ပေးရသည်။ ပြန်ပြောလျှင် တော်လှန်ရေး သစ္စာဖောက်ဟု စွပ်စွဲသည်။ အပြစ်ပေးသည်။ ခြိမ်းခြောက်သည်။ ထို့ကြောင့် သူပုန်များကို မကျေနပ်ကြ။ အစိုးရ အာဏာစက်တည်ရာ အဖြူရောင်နယ်မြေရှိ ပြည်သူများ ထို့အတူပင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်မရှိ၊ ကင်းကြေး၊ လူကြီးဧည့်ခံစရိတ်စသည့် ရန်ပုံငွေ အမျိုးမျိုးပေးရသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ်လည်း မလျော်သြဇာသုံး၍ အမျိုးမျိုး ခြယ်လှယ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားကိုလည်း မကျေနပ်ကြ။
ပြည်သူတို့သည် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး တညီတညွတ်တည်းရှိမှုကို လိုလားကြသည်။ အနိုင်အထက်စေခိုင်းခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းတို့ကို မလိုလားကြ။ သို့ဖြစ်၍ လျို့ဝှက်မဲပေးရသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့၏ ဆန္ဒမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ ပြည်သူတို့၏ အဖြေ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေး ပါတီများသည် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူတို့အတွက် စိတ်ရင်းအမှန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်ဆိုလျင် အများပြည်သူတို့၏ စိတ်နေသဘောထားကို နားလည်လေးစားသင့်ပါသည်။ ယခင်နှစ်ငါးဆယ်ကျော်က ရှိခဲ့သော ပြည်သူတို့၏ စိတ်နေသဘောထား ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း ရှိနေပါ သည်။ သို့ဖြစ်၍ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူအများ လိုလားသော လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ ညီညွတ်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ပါတီသာလျှင် လာမည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အောင်နိုင်မှုရမည်မှာ သေချာပါသည်ဟု ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်လိုက်ပါသည်။
Eleven Media Group _ Written by အောင်သန်း(အခြေခံပညာ)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် ပဏာမရွေးချယ်
MRTVက ပြသသွားသော မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုက ဘာအတွက်လဲ?(ရုပ်/သံ)
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့အံ့မခန်းစစ်းရေးလေးကျင့်မှုကိုပါ။ သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာလေတပ်မတွေ့ရပါဘူး မပါတာလားမပြတာလားတော့မသိပါ။ ကြည့်ရသလောက်ကတော့ နယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တွေကို တိုက်ရင်တော့ အသာလေးနိုင်မဲ့သဘောမှာရှိတယ်။ ခက်တာကအခုအချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များအပေါင်းကလည်း အခိုင်အမာစခန်းကြီးတွေနဲ့နေပြီး ခံတိုက်တာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး အင်အားတစ်ရာလောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းကို လမ်းဘေးတောထဲကနေ လေးငါးခြောက်ယောက်လောက်က ဝိုင်းပစ် ချီတက်လာတဲ့ဘက်ကသုံးလေးယောက်လောက်ကျသွားရင်တောထဲပြန် ဝင်းပြေးတာအစတောင် ရှာမရတော့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲပုံစံနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်တာပါ။
အခုလိုမျိုးတင့်ကားကြီးတွေနဲ့ တက်ပစ်ရလောက်အောင်ကိုမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ရှိလည်းသူတို့နေရာတွေက တင့်ကားသုံးလို့ မရလောက်ပါဘူးအကုန်လုံးကတောတွေတောင်တွေထဲမှာဆိုတော့ အဲ့ဒါဆိုပြည်တွင်းရန် အတွက် အဓိကမဟုတ်ပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ တော်တော်ဝေးသေးတယ်ထင်ပါတယ်။
အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့ကိုခံတိုက်မယ်ဆိုလို့ကတော့အင်း......ဟိုကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီးနဲ့ရေတပ် Fleetတစ်ခုလောက်လွှတ်လိုက်ရင် ပွဲသိမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အီရတ်ကိုတိုက်တုန်းကလိုပေါ့ ဆက်ဒမ်ကြီးကကန္တာရထဲမှာသူ့ခြေလျင်တပ်တွေကိုအသေအချာပြင်ထားတာ။ တင့်ကားတွေရော အမြှောက်တွေရော တကယ်လည်းဖြစ်ရောယူအက်စ်က လေယာဉ်နဲ့အနောက်ကအမြှောက်စခန်းတွေ မဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေကိုစိစိညက်ညက်နေအောင် ဗုံးကြဲ။ ရေတပ်သင်္ဘောတွေပေါ်ကနေ ဒုံးကျည်နဲ့ထုနေတာများ သီးတင်းကျွတ်မီးပန်းဖောက်နေသလားအောက်မေ့ရတယ်။
အဲ့ဒီလိုအီရတ်ရဲ့ခံစစ်ရောစိတ်ဓာတ်ရောကိုရိုက်ချိုးပြီးမှ ခြေလျင်ကဝင်တာပါ။ လူကိုတော်တော်တန်ဖိုးထားပြီး အထောက်အကူပစ္စည်းတွေနဲ့နည်းပညာကိုလှိုင်လှိုင်သုံးတဲ့ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။ တကယ်လုပ်ချင်ရင် ထိုင်းနဲ့ယူအက်စ်လုပ်တဲ့ Cobra လေ့ကျင်ခန်းလိုဟာမျိုးကပိုထိရောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ပြည်သူကိုခြောက်ရုံသက်သက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကိုခြောက်ယုံသက်သက်ဆိုရ င်တော့။ အောင်းမလေးကြောက်ပါတယ်ဗျာလို့ပဲအော်ချင်ပါတယ်
ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ၂၇ ရက်နေ့ အညာဒေသခြောက်မြို့နယ်၊ မကွေးခရီးစဉ်အား ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ၂၇ ရက်နေ့ အညာဒေသခြောက်မြို့နယ်၊ မကွေးခရီးစဉ်အား ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြိတ်သို့ စတင်ထွက်ခွာသည့် နံနက်ပိုင်းကပင် သွေးပေါင်များကျဆင်းနေပြီး ဆေးသွင်းစဉ်ခဏသာ ပေါင်ပြန်တက်ပြီး ခရီးထွက်စဉ် ပြန်ပြန်ကျနေသည်ဟု သိရသည်။
သွေးပေါင်ကျသည့်အပြင် အဖျားလည်း ရှိနေသောကြောင့် သူမ၏ဆရာဝန်နှင့် NLD တာဝန်ရှိသူများက ခရီးဆက်လက်မထွက်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြိတ်ခရီးစဉ်အတွင်း မကြာခဏ အန်နေသည်ဟု သူမ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကပြော သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ စည်းရုံးခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းရခြင်းကို မကွေး၊ကျောက်ပတောင်း၊တောင်တွင်းကြီး၊နတ်မောက်မြို့များမှ ပြည်သူလုထုအား အနူးအညွတ်တောင်းပန်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်ပတ်သက်ပြီး လူငယ်တိုင်းမေးနေကြသော မေးခွန်းများရဲ့ အဖြေများ..။ အပိုင်း (၁)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တကယ်မသိသေးသောလူငယ်များနှင့် တပ်မတော်ထဲရှိ သူမအား ဝေဖန်သောသူများ၏ မေးမြန်းချက်များကို မိမိလေ့လာမိသလောက် ဖြေကြားထားချက်များ ဖြစ်ပါသည်..။ ယခုအချိန်အတွင်း ပေါ်ပေါက်နေသော ရုရှားရောက် ပြည်သူ့လစာ စားနေရသော အရာရှိငယ်များ ဟု ယူဆသူများက သရော်ထားသော movie ဖိုင်ကြောင့် လူငယ်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အမြင်စောင်းမည်စိုးသဖြင့် ယခုအချက်အလက်များဖြင့် ပြန်ချေပဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ် (၄) အထိ အမေးအဖြေများမှာ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာအတွင်းက ဖြစ်သဖြင့် ယခု နံပါတ် (၅) အချက်ကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီး ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ ကြောင့် နိုင်ငံရေးကို ခုမှစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူပါ..ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီး သိရှိနားလည်းထားပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒေါ်စုရဲ့အကြောင်းကိုတော့ သေချာမသိသေးပါဘူး သူ့အကြောင်းကို သိတဲ့ သူများရှိရင် ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ ကြောင်းလေးတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးကြပါလား
(၅)သူမက ဘာ့ကြောင့် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်တာလဲ (ဗိုလ်ချုပ်သမီးဖြစ်လို့လား)
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်သိချင်တာလေးတွေကို ဖြေပေးကြပါလားခင်ဗျာ........
(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြင့်ခဲ့ခြင်းမှာ- နိုဘယ်ဆုကော်မတီရဲ့ကြေညာချက်ကို ဖော်ပြရရင်..။
အဓိကက မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကျယ်ချုပ်ကျနေတာကိုတောင် လုံးဝ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ အာဏာရှင်ကို အကြမ်းမဖက် ဆန့်ကျင်ခဲ့လို့ပါ။ လူတိုင်းမှာ အရှိန်အ၀ါဆိုတာ ရှိတယ် ညီလေးရဲ့။ အဲဒါက ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရဘူ။ လမ်းကြောင်းနဲ့သွားပြီး လင်ခရူဇာစီးသွားလည်း အရှိန်အ၀ါမရှိရင် ဆိုင်ကယ်ကတောင် ရပ်မပေးချင်ဘူး..။ ဒါတွေကိုမင်းတို့သိပါတယ်..။
အခုအချိန် သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရလို့ တစ်နှစ်အတွင်းပြောင်းလဲသွားတွေကိုပြန်ကြည့်ရင် သူလွတ်ပြီး တစ်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ထိုးတက်သွားတယ်၊ သူ့ရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့ EU နဲ့ US က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ လျော့လာတယ်၊ မြန်မာအာဆီယံဥက္ကဌဖြစ်ဖို့ အင်ဒိုနီးရှားက သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကို တောင်းရတယ်၊ သံဃာ့အရေးအခင်းတုန်းက ဂျပန်သတင်းထောက်ပစ်သတ်ခံရလို့ နှစ်နှစ်လောက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ မကူညီတဲ့ ဂျပန်က ယခုအခါ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်ကိုတောင် နှစ်ငါးဆယ် ထပ်ပြီး ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့ သဘောတူလိုက်တယ်။ အဲဒါတွေက နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Skype နဲ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ.။ မြစ်ဆုံကိစ္စကိုလည်း ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံေ၇းအကျဉ်းသားအချို့ ပြန်လွတ်လာတယ်။ နိုင်ငံတကာကလာတဲ့ အစိုးရအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေ၊ အားလုံးနီးပါးက သူနဲ့ မဆွေးနွေးပဲ ပြန်တဲ့သူသိပ်မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ အဲဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာတွေတာတွေက သူလွတ်လာလို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေပဲ။ အဲဒီလို အားလုံးပြောင်းလဲကုန်ရင် ပြည်သူ့ဘ၀တွေလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာမှာပဲ..။ ဒါတွေကို လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ အပြုသဘော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ရတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားဘူး။ (၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာအထိအခြေအနေများဖြစ်ပါသည်)
အောက်စဖို့ဒ် မှာ ဘွဲ့ရတယ်။ ရတဲ့ဘွဲ့က (Philosophy, Political Science, Eco) ဂုဏ်ထူးနဲ့ ၀ိဇ္ဖာဘွဲ့ဗျ။ နောက် နယူးယောက်က ကုလသမဂ ရုံးမှာ အလုပ်ဝင်တယ်၊ အဲဒီမှာ ဦးနေ၀င်းရဲ့ သိုးတွေနဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြဿနာဖြစ်တယ်။အမေစုကို နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆိုင်းငံ့ခဲ့တယ်။ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ရဲ့ သမီးတစ်ယောက်လို ဖြစ်နေလို့သာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် မပျက်ပြယ်တာပါ။
၁၉၇၀ မှာ မိုက်ကယ်အဲရစ်နဲ့တွေ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ မိုက်ကယ်အဲရစ်အကြောင်း တစခုပြောချင်တယ်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်က ဗုဒ္ဒဘာသာ၊ တက္ကသိုလ်မှာ အရှေ့တိုင်း ပါဠိဘာသာ သုတေသနပညာရှင်ပါမောက္ခ၊ အမေစုက ပါဠိဘာသာ နဲ့ အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှု အတွက်လေ့လာရင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတာ၊ ကျပြီး နီပေါနားက ဘူတန်မှာသွားနေကြတယ်။ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးက သဘောတူညီမှုတစ်ခု လုပ်ထားခဲ့ပြီးသား အဲဒါက ”ကျွန်မ ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်မတာဝန်ထမ်းဆာင်မယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုဖို့ ” ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ပဲ။
မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့ထိန်းကွပ်ဦးဆောင်မှုနဲ့ နဗန်းဆံကိုတောင် အိမ်ထောင်ကျတဲ့အထိ ထားတုန်း၊ အိမ်မှာနေရင် မြန်မာစကားကလွဲပြီး အင်္ဂလိပ်လို မသုံးနှုန်းတာတွေ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ့်လုံခြည်ကို ယက်ကန်း ယက်လုပ်ပြီး ၀တ်ခဲ့တာတွေ အိန္ဒယမှာရှိတဲ့အချိန် အသက် ဆယ့်ခုနှစ်နှစ် ကတည်းက ဒေလီမြို့စွန်က ဟိန္ဒူတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကို ကျောင်းအားရက်မှာ မိခင်နဲ့အတူ ပြုပြင်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်။ အမေစု ဘယ်လိုလူစားလဲ ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးကရွေးချယ်တဲ့ ခင်ပွန်းဟာလည်း နိုင်ငံခြားသားပင်ဖြစ်စေကာမူ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
(၅) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ထိုက်သလား ..ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို.. ပြန်ဖြေရရင် အမေစုရဲ့ အရည်အချင်းကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်.။ ဖြစ်ထိုက်မဖြစ်ထိုက်ဆိုတာကတော့ အောက်ကအချက်တွေကို သုံးသပ်ပေးကြပါ..။ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကလည်း အခြေအနေအများကြီးအပေါ်မှာ မူတည်ပါသေးတယ်.။
တိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက ခေါင်းဆောင်အများစုရဲ့ အရည်အချင်းကို ကြည့်ပါ ပညာတတ်အများစုနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ် ပညာရှင်များက အများစုဖြစ်ပါတယ်..။ ပညာတတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ ဒဿနိက၊ စီးပွားရေး အထူးပြုသုံးခုနဲ့ ဘွဲ့ရထားခဲ့ပါတယ်..။ နောက်ပြီးတော့ အရင်တုန်းက နိုင်ငံတကာအဆင့် စာတမ်းပြုစုရေးသားသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ယခုချိန်အထိ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူ့မှမလုပ်ခဲ့ဖူးသေးတဲ့ ဖခင် ဗိုလ်ချပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အတ္ထုပတ္တိအပါအ၀င် Asian Studies ကို ပြုစုခဲ့တယ်..။ နောက်ပြီး တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှလည်း ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဂျပန်ပြည်တွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို စာတမ်းတစောင် တင်ခဲ့တယ်..။ (ဂျပန်က အဲဒီကတည်းက လေးစားခဲ့ပါတယ်) နောက်ပိုင်းမှာ ဟီမာလေးယား (နိပေါ..တိဗက်/ဘူတန်)လူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းလေ့လာမှုတွေကို စာအုပ်တွေထုတ်ဝေခဲ့တယ်..။ အမေစုနဲ့ မိုက်ကယ်အဲရစ်တို့ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ အများကြီးပါပဲ..။
ဒါဟာ သူ့ရဲ့ သမိုင်းတစ်ခုကိုပဲ ပြနေတာပါ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အရာရှိအဖြစ် အလုပ်ဝင်နေစဉ်မှာ..အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ရဲ့ အနားမှာနေပြီး နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ Diplomacy နဲ့ ပေါ်လစီပိုင်းတွေကို အနီးကပ် လေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မြန်မာလူငယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုပြောတဲ့အချက်တွေလောက်နဲ့ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်သမီးကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ လေးစားနေကြတာဆိုတဲ့ အယူအဆတွ ပျောက်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်..
နောက်ပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ထိုက်တဲ့သူတွေမှာရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အမေစု လက်ရှိအခြေအနေနဲ့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြပါ့မယ်..။
ရိုးသားလား မရိုးသားသလားဆိုတာ... အကျယ်ချုပ် ပြန်လွတ်လွတ်ခြင်း လူထုနဲ့တွေတော့ ဖုန်းတွေနဲ့ တဖြတ်ဖြတ်ရိုက်နေတဲ့ ကင်မရာတွေကို တအံ့တသြ ကြည့်ပြီး ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ ဒီလိုတဖြတ်ဖြတ်ရိုက်နေတာကို သူ့အနေနဲ့ အံ့သြမိကြောင်း မမြင်ဖူးကြောင်း ပြည်သူတွေကို အံ့သြတကြီးပြောကြားခဲ့ဖူပါတယ်.။ ဒီစကားကိုအံ့ကြိတ်ပြီး နားထောင်ခဲ့ရဖူပါတယ်..။ သူရဲ့ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့စကားကြောင့် တစ်စုံတရာကို ဒေါသထွက်ခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ..။ ဒီလောက်တောင်မှ......နားပိတ်မျက်စိပိတ် ထားရသလားလို့ပါ..။
မည်သည့်စည်းရုံးရေးကိစ္စပင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူကြားထဲမှာ တည်တည်ကြည်ကြည် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်တည်ပြီး ဗုံးမကြောက်၊ သေနတ်မကြောက်ပဲ မှန်ရာကို ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်စကားပြောလေ့ရှိသူပါ။
ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုကတော့ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး.. အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးဖိုရမ်ကို online ကတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြား၊ ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့်ဌာနတွေမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပက လူငယ်တွေမေးသမျှကို အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် လက်တမ်းဖြေပေးနေတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ..။
(၄) စွန့် လွတ်အနစ်နာခံမှု
အကျယ်ချုပ်ဆယ့်ငါးနှစ်ကျော်က သက်သေပါပဲ..။ နောက်ပြီး ရသမျှဆုငွေတွေ လှူဒါးငွေတွေ အားလုံးနီးပါးကိုလည်း NLD အတွက်တောင် ရည်ရွယ်သုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲ တစ်ခါတည်း လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်..။ အဲဒါတွေကိုစုထားရင် သားနှစ်ယောက်လုံး မီလျံနာဖြစ်နေတာ ကြာပြီပေါ့..။ အခု သူ့သားနှစ်ယောက်က အင်္ဂလန်မှာ သာမန်လူတန်းစား အဆင့်ပါပဲ..။ ဒီမေးခွန်းက စစ်သားများ ခဏခဏ မေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းပါ..။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က သူ့အိမ်ကို ပြင်တဲ့ စစ်သားလေးတွေကို ဒန်ပေါက်ဝယ်ကျွေးတုန်းက ရဲဘော်လေးတွေ မလောက်မှာစိုးလို့ သူကိုယ်တိုင်က ဒန်ပေါက်အလွတ်နဲ့ ငါးပိကြော်စားခဲ့တာက သာဓကပါ..။ ယူနက်စကိုက ချီးမြှင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေါ်လာတစ်သိန်းကို ချက်ချင်းလှူလိုက်တာကလည်း အတုယူစရာပါပဲ..။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတယ်ဆိုတာကိုတော့ မညွှန်းချင်တော့ပါဘူး။ NLD ထဲကလူတွေ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အရာရာတိုင်းကို ငါသိတယ်.. ငါတတ်တယ်ဆိုပြီး ဘယ်တော့မှ အာဏာရှင်ဆန်စွာ မဆုံးဖြတ်ပဲ ဒီမိုကရေစီဆန်စွာ အများသဘောဆန္ဒနဲ့ပဲ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသမှုထဲက တစ်ခုပါပဲ..။
ဒါပေမယ့် အမေစုကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် မျှော်လင့်မထားပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်သည်ဖြစ်စေမရောက်သည်ဖြစ်စေ လူထုကတော့ လေးစားယုံကြည်နေကြဦးမှာပါ..။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ( ၁၉ . ၅ . ၁၉၄၇ ဂျူဗလီဟော )
ကိုးကား .. အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့) သဇင်နီ ၊ EMG, The Voice, (Shwe Aim Si အံ့ဖွယ် မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် စံပြအမျိုးသမီး) သတင်းစာမှတ်တမ်းများ..။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းများ..။
ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် အောက်ပါလင့်တွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါသည်..။https://www.facebook.com/notes/yan-aung/%E1%80%B1%E1%80%92%E1%81%9A%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AF%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%8A%E1%80%B9-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%B9%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%94%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%B1%E1%80%99%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%82%95-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC/277837752292485?ref=notif&notif_t=like
Yan Aung -facebook မှ